สภาพการทำงานและการจ้างงานในภาคเกษตรของประเทศไทย: การสำรวจแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในไร่อ้อย สวนยาง สวนปาล์ม และไร่ข้าวโพด
โดยประวัติศาสตร์แล้ว ภาคเกษตรถือเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทย ประชากรวัยทำงานส่วนใหญ่ของประเทศมีการจ้างงานอยู่ในภาคเกษตร ทั้งนี้ แม้ว่าแรงงานในภาคเกษตรจะมีจำนวนลดลดงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ยังมีแรงงานจำนวนถึง 12.7 ล้านคน ที่ยังทำงานอยู่ในภาคเกษตร หรือคิดเป็น 30% ของแรงงานทั้งหมดในประเทศ โดยภาคเกษตรมีแนวโน้มต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติจากกัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมามากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยอุดช่องว่างการขาดแคลนแรงงานที่นับวันยิ่งสูงขึ้น
Thailand's agriculture sector increasingly depends on migrant workers from Cambodia, the Lao People's Democratic Republic, and Myanmar. This report, based onasurvey of migrant workers and interviews with migrant workers and key informants, sheds light on the situation of migrant workers in this sector. It identifies gaps in policies and practices and providesaset of recommendations.
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ မိတ်ဆက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်
မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေမိတ်ဆက် လမ်းညွှန်စာအုပ်ကို လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ပညာရှင်များ၊ ကျောင်းသား၊ အလုပ်ရှင်များ၊ အလုပ်သမား သမဂ္ဂများနှင့် အလုပ်သမားများ အတွက် ရည်ရွယ်လျက် မြန်မာနိုင်ငံမှ အတည်ပြုထားသော နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမား စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို လက်လှမ်းမီနိုင်စေရန် နှင့် ၎င်းတို့အား နိုင်ငံဥပဒေများတွင် မည်ကဲ့သို့ ထည့်သွင်း ပြဌာန်း ထားကြောင်း ပြုစု ဖော်ပြထားပါသည်။
Introduction to Laws on Occupational Safety and Health in Myanmar 2020
This Introduction to laws on occupational safety and health guidebook has been developed for human resource practitioners, academics, students, employers, trade unions, and workers to provide accessible information on occupational safety and health (OSH) international labour standards and how these are translated into national laws in Myanmar.
နိုင်ငံစုံအခြေစိုက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် စည်းမျဥ်းများ နှင့် လူမှုဘ၀မူ၀ါဒဆိုင်ရာ သုံးပွင့်ဆိုင် ကြေညာစာတမ်း (MNE Declaration)
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ကိုယ်ပိုင်အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ခြင်းနည်းလမ်း ဗားရှင်း ၁.၀
Myanmar: Legal Review of national laws and regulations related to child labour in light of international standards 2020, Executive report
This paper summarizesareview of laws and practice relating to child labour that was as undertaken in and covers developments up to December 2020, as well as the existing practices in Myanmar are implementing the requirements of the international standards on child labour, such as in particular the UN Convention on the Rights of the Child; the ILO Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) and the ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182).
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် ကလေးအလုပ်သမား အခြေအနေ
Kantar Public Information Myanmar အဖွဲ့နှင့်အတူ ဆောင်ရွက်လျက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာ အဖွဲ့သည် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ကလေး အလုပ်သမားများ၏ ဖြစ်စဉ်နှင့် တွန်းအား၊ ကန်အားတို့အပေါ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော၊ နောင်ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်မည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို နားလည် သဘောပေါက်ရန် အဝေးမှ သီးခြား ကွင်းဆင်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သုတေသနသည် ၂၀၂၀ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအထိ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် ခြောက်ခုဖြစ်သည့် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကလေး အလုပ်သမားအ‌ရေးနှင့် သင်ဘယ်လို ကူညီနိုင်မလဲ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကလေးသူငယ် ၁၁ ဦးတွင် ၁ ဦးသည် ကလေးအလုပ်သမားအဖြစ်နှင့် ပိတ်မိနေပြီး ထိုကလေး အလုပ်သမားများထဲမှ ထက်ဝက်သည် အန္တရာယ်ရှိသော အခြေအနေများကို တွေ့ကြုံနေကြရသည်။ ကလေးအလုပ်သမားဖြစ်ခြင်းသည် ကလေးများအား ပညာသင်ကြားမှု မရနိုင်ပါ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထိခိုက်စေရုံမျှမက အသက်အန္တရာယ် ရှိနိုင်သည်၊ ကလေးများ၊ ရပ်ရွာလူထုများနှင့် နိုင်ငံ တိုးတက်ရေးကို အတားအဆီး ဖြစ်စေပါသည်။ ထို့အပြင် ကလေးအလုပ်သမား ဖြစ်စေခြင်းသည် တရားဥပဒေကို ဆန့်ကျင် ချိုးဖောက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကလေးအလုပ်သမားအရေး ဥပဒေရေးရာ သုံးသပ်ချက်
ဤလက်ကမ်းစာစောင်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၂၀ခုနှစ်က ဆောင်ရွက်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကလေးအလုပ်သမားနှင့် စပ်လျဉ်းသော အမျိုးသားဥပဒေများနှင့် နည်းဥပဒေများကို နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများနှင့်အညီ ဥပဒေရေးရာ သုံးသပ်ချက်ဆိုင်ရာ စာတမ်းအပေါ် အခြေခံထားသည်။ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ ပါဝင်သည်။
The National Social Security System in Myanmar is regulated by the Social Security Law, 2012 (SSL), which amended the Social Security Act, 1954. The SSL was enacted on 31 August 2012, and came into force on 1 April 2014. In accordance with the provisions of the SSL , the Government and the Ministry of Labour, Employment and Social Security (MOLES) adopted the implementing regulations – the Social Security Rules, 2014 (SSR) – on2April 2014, and asaresult, the gradual implementation of social security schemes commenced.
Canaprivate-sector model train SMEs in the long-run? Lessons from SCORE Training in Myanmar for inspiration